KWIT | By Halima Osman
Published April 12, 2021 at 8:46 PM CDT
Xubno ka tirsan Aqalka Shaqaalaha Katooliga ee Iowa City House ayaa sheegay inay ka niyad jabeen Badhasaabka Kim Reynolds oo diiday diidmadii dawladda dhexe ee ahayd inuu qaabilo muhaajiriinta ku sugan Iowa.
Toddobaadkii la soo dhaafay, guddoomiyaha ayaa yiri, Iowa ma lahan tas-hiilaad ay ku hoydaan carruurta soo galootiga ah.
Telefishinka KCCI ee ku yaal Des Moines ayaa ku soo warramey sarkaal ka tirsan Katooliga Worker inuu leeyahay gobolku wuxuu fursad u heystaa carruurta soo galootiga ah si looga badbaadiyo dhibaatada loona la midoobo qoysaskooda
Shalay, xaflad xusuus ah ayaa loo qabtay u ololeeyaha bulshada iyo hogaamiyaha bulshada Vietnam ee Hong Cuc Nguyen (Hong cook Win).
Daraasiin ayaa isugu soo ururay guriga bulshada ee Mary J. Treglia si loo xasuusto Nguyen oo u dhintey dhibaatooyinkii COVID-19 bishii May ee sanadkii hore.
Nguyen waxay u noqotay tusaale iyo xoog wanaagsan boqolaal dad ah oo ka tirsan bulshada Sio City City Asia iyada oo shaqadeeda caawineysa soo galootiga.
Xusuusta ayaa ka dhacday waxa ay noqon laheyd dhalashadii 88aad ee Nguyen.
Ramadaan ayaa bilaabatay fiidkan. Bisha Barakaysan ee kalandarka Islaamka, waxaa lagu sharfaa soonka, dhammayska, iyo bulshada.
Maanta, koox arday muslimiin ah oo dhigata dugsiga sare oo ka socda South Sioux City Community School ayaa la kulmay macallimiinta si ay u baraan bisha Ramadaan Waxay soo jeedinayaan macallimiintu inay ardayda muslimiinta ah siiyaan dabacsanaan inta lagu jiro bisha Ramadaan.
Dowlada Iowa Kim Reynolds ayaa maanta warbixin ka siisay talaalka gobolka. Reynolds ayaa sheegay in ilaa hada 44% ee Iowans 18 iyo wixii ka weyn ay heleen…